Zucchini uye karoti cream nehowa | Kitchen Recipes
Maria vazquez | | Vegetable Recipes, Mapepa ane hutano
Iro cream ye zucchini uye karoti ine howa yandinopa nhasi inoita senge chirevo chikuru sechisvusvuro chakareruka. Hapana chinhu chiri nyore, uyezve, pane kugadzira miriwo cream. Kumba tinowanzo gadzira imwe vhiki yega yega kuti tinakirwe pakudya kwemasikati kwakasiyana kana kudya kwemanheru uye ndinotenda nemoyo wese kuti itsika yakanaka.
Iwe hauzofanirwa kuita chero chinhu kunze kweyakajairika kugadzirira iyi cream iyo chinhu chikuru zucchini kunyange kuvapo kwekaroti kunonyanya kuoneka nemuvara wayo. Pamusoro pezvo, ine zvimwe zvinhu zvakaita sehanyanisi, leek nembatatisi kuti zvipiwe hunhu.
Iyo pachayo kirimu inonaka, asi kana iwe ukawedzera zvimwe sauteed howa kana howa mhedzisiro idenderedzwa. Zvakanaka, zvibikire pagrill nemafuta maduku zvikuru kuitira kuti usawedzera mamwe mafuta kukrimu. Unogona kuzvibika muchoto kana uchizobatidza chimwe chinhu. Imi pachenyu!
Iyo zucchini uye karoti cream ine sautéed mushroom yatinopa nhasi isarudzo yakanaka yekudya kwemanheru. Uye kuigadzirira hakutore kupfuura maminitsi makumi matatu.
3 makarotsi makuru
2 svikiro mbatatisi
Mvura kana muto wemuriwo
1 tablespoons emafuta emuorivhi
350 g. yakatemwa howa
Al uye pepper
Tinotanga nekucheka onion, leek uye karoti zvishoma.
Isu tinoisa mafuta mupoto uye tinokasira zvinhu zvitatu izvi apo isu tinocheka zucchini mu cubes.
Kamwe kucheka, wedzera zucchini kune casserole uye sautee kwemaminetsi mashoma.
Kunyange, peel uye ucheke mbatatisi kuti isu tinowedzerawo pamwe nepini yemunyu uye pepper.
Pakarepo mushure, tinowedzera mvura kana muto wemuriwo kusvikira yava kuda kuvhara miriwo uye kuunza kumota.
Bika kwemaminitsi makumi mana kusvika mbatatisi yapfava tobva takuya.
Isu tinotora mukana iwoyo maminitsi gumi nemashanu kuti grill the howa. Kuti tiite izvi, tinotsvaira griddle nemafuta, kupisa uye kuisa mahowa kuitira kuti arege kupindirana. Mwaka uye kubika kusvikira ndarama yakatsvuka kune rumwe rutivi. Mushure mezvo, tinoshandura, tinosasa neparsley uye kupedza kubika.
Isu tinoshumira zucchini uye karoti kamu cream ne sautéed mushroom, inopisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Zucchini uye karoti cream nehowa